Lahatsary: Tovovavy Saodiana Nahazo Tsiny Raha Niharan’ny Herisetra Teo Anoloan’ny Tsenambarotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2013 3:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, عربي, English
Pikantsary avy amin'ilay lahatsary mampiseho ny fifamaliana teo amin'ny lehilahy sy ireo tovovavy
Niteraka hotakotaka tao amin'ny aterineto ilay lahatsary mampiseho ireo tovolahy misetrasetra amin'ireo vehivavy tao amin'ny tsenambarotra iray ao Dhahran, faritany atsinanan'i Arabia saodita.
Mampiseho jiolahimboto manaraka tovovavy ao ivelan'ny tsenambarotra ny lahatsary - ary fifandirana eo amin'ireo tovovavy sy sasany tamin'ireo tovolahy. Nofafàna tao amin'ny YouTube ny dika sasany tamin'ny lahatsary taorian'ny fahatezerana.
Amin'ity lahatsary Youtube ity, izay mbola afaka jerena, manome tsiny ireo vehivavy ny cccoppwew satria tsy nitafy tsara araka ny tokony izy [ar] izy ireo:
Ry rahavaviko, nivoaka ny trano tsy nisarona hidjab (voaly) araka ny tokony izy ianao, ka tsy nirakotra tsara ary nandeha teny amin'ny tsenambarotra tsy misy lehilahy mpiambina vehivavy ianao ary tsy nisy antony [nandehanana tany amin'ny tsenambarotra] satria tsy nitondra poketra na harona misy zavatra avy novidiana akory ianao. Miarova tena ianareo amin'ireo malemy. Raha nitafy araka ny tokony izy ianao ka nandeha teny amin'ny tsenambarotra mba hividy izay tokony hovidiana, tsy nisy olona nisakana anareo akory.
Isaory Andriamanitra noho ny fahadiovam-pitondrantena.
Na dia misarona aza ny volon'ireo tovovavy ary nirakotra abaya, sy ilay fitafy rebareba maintimainty manarona tanteraka ny vatana, toa nitranga ny korontana satria tsy nosaronan'izy ireo koa ny endriny.
Noresahana tao amin'ny Twitter tamin'ny alalan'ny teny ifankafantarana [ar] #تحرش_شباب_بفتيات_بالشرقيه midika hoe ‘Tanora Misetrasetra tovovavy ao amin'ny faritra atsinanana’ ireo fanehoan-kevitra mikasika ny fomba fitafian'izy ireo.
Manar Alkhalidi nanome tsiny ireo tovovavy ihany koa:
Manaiky aho fa misy ireo tovolahy tsy menatra sy tsy matahotra an'Andriamanitra, saingy raha niafinafina ireo tovovavy ireo ary tsy nampiseho ny [maha-vehivavy azy] tsy nisy olona nanatona azy ireo mihitsy.
Manontany ihany koa ity mpisera Twitter ity hoe nahoana ireo tovovavy ireo no tsy manaraka ny fomba fitafy henjana natokana hoan'ny vehivavy Saodiana – mirakotra mainty tanteraka, manomboka eo amin'ny loha hatrany am-paladia :
Nahoana izy ireo no tsy mitafy araka ny tokony izy? Tsy mahafantatra ve i Eva fa mety hivadika aminao ny biby raha noana?
Nilaza kosa i Luma Alnami fa an'ireo lehilahy ny fahadisoana:
Manome tsiny ireo tovovavy ireo olona sasany manana fisainana tahaka ny biby izay hitantsika tao amin'ny lahatsary. Mety hanao herisetra amin'ny fanariam-pako ianao raha mahita azy mihetsika.
Mitovy hevitra i Saras:
Averiko indray, tsy mampaninona na ohatrinona na manao ahoana ny fomba fampisehoan'ny tovovavy ny vatany, tsy fialan-tsiny hoentina hanaovana herisetra azy izany raha tsy hoe biby ianao.
Nitaraina momba ireo mpijery naka sary sy nandefa ny lahatsary misy ny herisetra ity mpisera ity:
Tokony hotsaraina ary samborina ilay olona mampihomehy naka sary mba atao ohatra tahaka ireo andiam-biby nalainy sary izay mampiseho ny tsy fananany mahaolona.
Tao anatin'izany, nanontany i Moheeb Alsheikh hoe nankaiza ireo manampahefana nandritra ny zava-nitranga:
Raha toa ka tsy fantatsika ny fomban'ireo tovovavy sy tovolahy ao amin'ny lahatsary ary koa ny fianarana nodiaviny, ny fanontaniana dia: nankaiza ireo manampahefana ? Nankaiza ny fiarovana? Nankaiza ny Vaomiera [polisim-pivavahana saodiana na Komity ho an'ny Fampiroboroboana ny Hatsaram-panahy sy ny Fisorohana ny Hadalana] ? Ary nankaiza ireo tovolahy mendrika? Aiza ianareo?
Nanome vahaolana i Khalid:
Tsotra ny vahaolana: tsenambarotra atokana ho an'ny vehivavy fotsiny ary hamaha ny olana eo amin'ny roa tonta izany, satria tanora ireo tovolahy ary tsy misy lalàna manakana azy ireo na manakana ny vehivavy tsy hikarakara tarehy